कोरोना महामारि सिजन २ र बेखबर सरकार « Postpati – News For All
तुफान सिंह कालिकोटे पढ्न लाग्ने समय : २ मिनेट
कोरोना आफैमा मृत्यु होइन यो त हाम्रो बुझाई हो। म एउटा कोरोना पोजेटिभ ब्यक्ती हुँ । मैले आफ्नो भोगाई शेयर गर्न मन लाग्यो र तपाईंहरुको बिचमा राख्न जरुरी ठाने । बिगत ३ महिना म आफै कोरोना पोजेटिभ पुष्टि भएपछी ६ दिनको आइसीयु र होम क्वारेन्टाइनमा बस्दा मैले निकै ठुलो तनाब भोगेको छु । तनाब हुन्छ तर हार मान्नु हुँदैन । उच्च मनोबलका साथ दैनिकी एक्साईज र नियमित तातो पानीले नै हामिले कोरोनालाई जित्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म चै बिश्वास गर्छु ।
यो रुगाखोकी जस्तै हो । बेला बेला सास फेर्न गाह्रो हुने, नाक पुरै बन्द, जिब्रो स्वाद बिहिन हुन्छ । शरीर पुरै भारी र केही ज्वरो आउछ । यो त्यति सामान्य रोग पनि हो र त्यति सामान्य रोग पनि होइन । सचेत रहनु नै यसको एकमात्र बच्ने उपाय हो । त्यो सचेतन भनेको सामाजिक दुरी र मास्क लगाउने नै हो ।
बिश्वलाई नै तहसनहस पारेको कोरोनाले पहिलो चरणमा नेपाललाई बिश्वका अन्य देशहरु भन्दा केही सानो मात्रामा क्षति पुर्यायो । दोस्रो चरणमा भने यो निकै भयावह देखिएको छ । यसरी नै यसको नियन्त्रणमा सरकार आफै लागेन र चासो दिएन भने हाम्रो छिमेकी देश भारतले भोक्नु परेको पीडा भन्दा हामीले अझै भयानक पीडा खप्नु पर्ने देखिन्छ ।
सरकार भने भिबिन्न अध्यादेश र कुर्चिको खेलमा दिनप्रतिदिन दोहोरी जस्तै सिंहदरबारमा ब्यस्त देखिन्छ । सरकारलाई एउटा मात्रै जनताको बिन्ती छ, अहिले कुर्सी बचाउने खेल भन्दा जनता बचाउन तिर लाग्नुस् । भोलि जनता बाँचे भने तिमिलाई फेरि सिंहदरबार पुगाउन उनीहरु नै हुन् । त्यसैले यतिखेर सरकारले जनतालाई देशमा सरकार भएको आभास दिलाउन जरुरी देखिन्छ । अस्पतालमा बेड र भ्यान्टेलेटरको ब्यबस्था गर्नुपर्छ ।
एकातिर जनता स्वास्थ सामाग्री नभएर मारिरहेको छ भने अर्कातीर जनताको खुनपसिनाबाट तिरेको करले बालुवाटारमा भोजभतेरमा मस्त भएको छ । र, जनतालाई अदुवा पानी खाउ भनेर सिकाइरहेको छ ।
पाकिस्तान सरकारले आफ्ना जनतालाई कोरोनाको सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएमा प्रत्यक परिवारलाई ७-१० लाखको उपचार निशुल्क हुने घोषणा गरे । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले यसबाट पाठ सिकेको खै ? जनतालाई मर्न दिइदैन भनेर मुखले मात्रै बोलेर हुन्छ ? जनता त मारिरहेको छ त ।
हामी जनताले यो सरकारबाट बढी आशा पनि नगरौं । किनभने यो सरकारले बोल्ने मात्रै जानेको छ ।
देशलाई लकडाउन बनाएर जनता मार्न पाइंदैन । मुखले मात्रै सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बोलेर हुने भए यतिखेर नेपाल विश्वकै समृद्ध देश बनिसक्थ्यो । काम गरौँ, जनतालाई मर्नबाट बचाऔं ।